Yakavanzika Policy - Dhizaini Dhizaini
Dhizaini Spot Chakavanzika Chirevo
Kana mushure mekusarudza-mukati, ukachinja pfungwa, unogona kubvisa mvumo yako kuti tibate iwe, kuitira kuenderera kuunganidzwa, kushandisa kana kuzivisa ruzivo rwako, chero nguva, nekutibata nesu pa info@dznrspot.com
Kana iwe ukasarudza yakananga kubhadhara gedhi kuti upedze kutenga kwako, ipapo Dhizaina Spot anochengeta yako kadhi rechikwereti data. Iyo yakavharidzirwa kuburikidza neKubhadhara Kadhi Indasitiri Dhata Dziviriro (PCI-DSS). Yako yekutenga data data inochengetwa chete sekureba sekukosha kuti upedze yako yekutenga transaction. Mushure meizvozvo zvapera, ruzivo rwako rwekutenga zvekutengesa rwabviswa.
Kana iwe uchititumira nekodhi yako yekadhi yemarikiti, mashoko acho akavharidzirwa achishandiswa akachengeteka yakachengetedza teknolojia yepamusoro (SSL) uye akachengetwa neAES-256 kubatanidza. Kunyange zvazvo pasina nzira yekufambisa paIndaneti kana mune zvigadzirwa zvemagetsi ndeye 100% yakachengeteka, isu tinotevera zvose zvePCI-DSS zvinodiwa uye tinoshandisa zvinowanzogamuchirwa zvigadzirwa zvemabhizimisi.